सानेपा हत्याकाण्ड: पछाडिबाट डोरी लगाएर लडायाे, कपाल समाएर टाउकाे ठाेकायाे
ललितपुर, २८ माघ । विहान १० वजेर २० मिनेटको सयममा विजय चौधरी भान्सा कोठा पसे । खाना पकाईरहेकी मुना कार्कीको घाँटीमा पछाडिबाट डोरी लगाएर र
यूरोप जाने सपनाः दश कक्षा नपढेकाबाट एमए पास ठगिन्छन्
काठमाडौं, २८ माघ । पछिल्लो समय रोजगारीको लागि यूरोपेली मुलुकमा पठाई दिने नाममा ठगीधन्दा बढेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ठगीका घटना खाडी मुलुकमा बढी भए पनि रकमका
सर्वेन्द्र खनालसँगै तीन एआइजी र १८ डिआइजीले पाए अवकाश (सूचीसहित)
काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल प्रहरीका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले आजबाट अवकाश पाएका छन् । ३० वर्षे सेवावधि पूरा भएसँगै उनका अलावा तीन एआइजी र १८ डिआइजीले अवकाश पाएका छन् ।
सर्वेन्द्र खनालले भने-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको छवि उचो राखें
काठमाडौं, २८ माघ । तीस बर्ष सेवा अवधि पुरा गरी सेवानिबृत्त हुँदै गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगतिको वर्णन गरे । उनले तीन दशक लामो प्रहरी सेवाको
सानेपा हत्याकाण्डः पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के छ ?
काठमाडौं, २८ माघ । पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना कार्कीको सोमबार विहान सानेपास्थित घरमै भएको हत्याको कारणबारे प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले प्रारम्भिक
आइजी र एआइजीको चलखेलमा को–को ?
काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल प्रहरीले मंगलबार २७ औं महानिरीक्षक पाउने निश्चितप्रायः छ । आइजीपीका लागि ठाकुर ज्ञवाली स्वभाविक दाबेदार हुन्। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजिपीको टुंगो लगाउने छ । उनीहरुमध्ये
ठगी आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ
सोलुखुम्बु, २८ माघ : ठगी गरेको आरोपमा सोलुखुम्बुका एक व्यक्तिलाई भक्तपुरमा पक्राउ गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका–२ काँगेलगैरीका ४० वर्षीय बालकृष्ण कार्कीलाई हालै
दमौली, २८ माघ : तनहुँको भानु नगरपालिकाका इञ्जिनीयर सुकदेव अधिकारी र वडा नं १३ का सदस्य कृष्णबहादुर अधिकारी सोमबार घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय
काठमाडौं, २८ माघ । कुनै–कुनै हत्याका घटना सुन्नेलाई नै पीडादायी हुन्छन् । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको सोमबार त्यस्तै निर्मम हत्या भएको छ । घटनामा घरायसी कामदार विजय चौधरी संलग्न
हत्या पछि आत्महत्या
काठमाडौ, २८ माघ । पुर्वसचिव अर्जुन कार्कीका घरेलु कामदारले उनकी पत्नी मुना कार्कीको हत्या गरी आत्महत्या गरेका छन् । ललितपुर उपमहानगनरपालिका –२ सानेपास्थित घरमा आइतबार कामदा विजय चौधरीले कार्कीको घाँटीमा
रिपोर्टर्स नेपाल, २८ माघ। ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी आजबाट नेपाल प्रहरीका २६ औं आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले अवकाश पाउँदैछन् । उनको साथमा एउटै ब्याची तीन एआइजी र १७ डिआइजीले अवकाश
कामदारले गरे मुनाको हत्या
काठमाडौँ, २८ माघ । विहान १० वजेर २० मिनेटको सयममा विजय चौधरी भान्सा कोठा पसेर खाना पकाईरहेकी मुना कार्कीको घाँटीमा पछाडिबाट डोरी लगाएर र बल लगाएर उनलाई भूइँमा लडाए ।